ज्योतिले वक्षस्थल देखिने तस्विर राख्दै भनिन् : ‘म सेक्सी हुँदा तपाईंलाई के समस्या ? – jagritikhabar.com
ज्योतिले वक्षस्थल देखिने तस्विर राख्दै भनिन् : ‘म सेक्सी हुँदा तपाईंलाई के समस्या ?
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चामा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, कपडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । गायिका ज्योति मगरले सामाजिक संजाल फेसबुकमा आइतवार अलिक बोल्ड नै तस्विर शेयर गरिन् । कुनै ग्रामिण सडकमा खिचिएको उक्त तस्विरमा उनले आफ्नै टीसर्ट माथि तानेकी छिन् । तस्विरमा उनको वक्षस्थल स्पष्टसँग देखिन्छ ।
बोल्ड तस्विरहरू सार्वजनिक गर्नु त उनका लागि सामान्य नै हो । तर, आइतवार तस्विरसँगै उनले लेखेको ‘क्याप्सन’ले सबैको ध्यान तानेको छ ।
क्याप्सनमा उनले लेखेकी छन्–